DBMS သင်ရိုး - ဒေတာဘေ့စ Tutorial နှင့် Concepts
DBMS tutorial သို့မဟုတ် Database tutorial တွင် database ၏သဘောတရားများကိုနားလည်ရန်နှင့်သင်ရိုးညွှန်းတမ်းအတွက် DBMS ကိုလေ့လာနိုင်ရန်ကူညီမည့်အကြောင်းအရာများပါ ၀ င်သည်။ ဤသင်ခန်းစာသည် relational database management systems tutorial လည်းဖြစ်နိုင်သည်။
ဤသင်ခန်းစာတွင် DBMS ၏သဘောတရားများကိုကျွန်ုပ်တို့အသေးစိတ်ဖော်ပြသွားပါမည်။ DBMS ၏အဓိကအကြောင်းအရာများသည်ဒေတာဘေ့စ်စီမံခန့်ခွဲမှုစနစ်၏သဘောတရားများကိုရှင်းလင်းရန်ကျွန်ုပ်တို့ကိုကူညီလိမ့်မည်။
နာမတော်ကိုအမှီပြု။ ကိုယ်တိုင်ကကဘာလဲဆိုတာဖော်ပြသည် ဒေတာဘေ့စ်တစ်ခုသည်ဒေတာအားလုံးကိုသိမ်းဆည်းထားသောနေရာ / ကွန်တိန်နာဖြစ်သည်။ သို့သော်အချက်အလက်ဆိုသည်မှာအဘယ်နည်း။ ဒေတာဘေ့စ်တစ်ခုတွင်အသေးငယ်ဆုံးသောအချက်အလက်သည်ပင်ဒေတာဖြစ်လာသည်။ ဥပမာကျောင်းသားသည်ဒေတာ၊ သင်တန်းသည်ဒေတာဖြစ်ပြီးအရောင်သည်ဒေတာ၊ အမြင့်၊ အလေးချိန်၊ အစားအစာအားလုံးသည်ဒေတာဖြစ်သည်။ တိုတောင်းသောခုနှစ်တွင်အားလုံးအသက်ရှင်သောနှင့် Non- လူနေမှု ဒီကမ္ဘာကြီးထဲမှာအရာဝတ္ထုဒေတာရှိပါတယ်.
ကျနော်တို့ကသူတို့ကိုအပေါ်အမျိုးမျိုးသောလုပ်ရပ်များလုပ်ဆောင်နိုင်အောင်ကျနော်တို့ဒေတာလိုအပ်ပါတယ်။ ပြောရရင်ငါတို့မှာဒေတာဘေ့စ်မရှိဘူး၊ ကလေးတစ်ယောက်ရဲ့အလေးချိန်နဲ့အလေးချိန်ကိုတစ်နှစ်အတွင်းမှတ်တမ်းတင်ချင်တယ်။ ကျွန်တော်တို့လုပ်သမျှကိုလစဉ်စာရွက်တစ်ရွက်ထဲမှာမှတ်ထားပါ။ အချိန်ကာလတစ်ခုသို့မဟုတ်နှစ်ကုန်ပိုင်းတွင်သူ / သူမမှန်မှန်ကန်ကန်ကြီးထွားနေခြင်းရှိမရှိကျွန်ုပ်တို့စစ်ဆေးလိမ့်မည်။ အကယ်၍ အချို့သောအချက်အလက်သည်မှားယွင်းစွာသို့မဟုတ်ဆီလျှော်မှုမရှိပါကကျွန်ုပ်တို့က၎င်းကိုပြင်ပေးသည်။ တူညီသောဒေတာဘေ့စကိုအသုံးပြု။ ပြုမိသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်ဤအချက်အလက်အားလုံးကိုဒေတာဘေ့စ်တွင်သိမ်းဆည်းလိမ့်မည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်ကြီးထွားမှုကိုစစ်ဆေးလိုပါကဒေတာဘေ့စ်မှသတင်းအချက်အလက်များကိုဆွဲထုတ်လိမ့်မည်။ မည်သည့်သတင်းအချက်အလက်ကိုမဆိုပြောင်းလဲရန်လိုအပ်လျှင်၎င်းတို့ကိုအသစ်ပြောင်း / ဖျက်ပစ်နိုင်သည်။ ဒါပေမယ့်ဒေတာအားလုံးတစ်နေရာတည်း၌ဖြစ်လိမ့်မည် - အဆိုပါဒေတာဘေ့စ။
ဒေတာဘေ့စ်တစ်ခုတွင်ကျွန်ုပ်တို့သည်ဆက်စပ်ဒေတာများကိုသာစုဖွဲ့ကာစားပွဲဝိုင်းဟုခေါ်သောအုပ်စုအမည်တစ်ခုအောက်တွင်သိုလှောင်ထားလိမ့်မည်။ ၎င်းသည်မည်သည့်ဒေတာကိုမည်သည့်နေရာတွင်သိုလှောင်ထားသည်ကိုခွဲခြားသတ်မှတ်ရာတွင်အထောက်အကူပြုသည်။ ၎င်းသည်ဒေတာဘေ့စ်တစ်ခုလုံးတွင်အထူးအချက်အလက်များရှာဖွေရန်အချိန်ကိုလျော့နည်းစေသည်။ ဥပမာ၊ ကျောင်းသား၊ ဆရာ၊ အတန်း၊ ဘာသာရပ်၊ ၀ န်ထမ်း၊ ဌာနစသည်ဖြင့်တစ် ဦး ချင်းစီဖွဲ့စည်းသည် စားပွဲ.
ကျွန်ုပ်တို့နှင့်သက်ဆိုင်သောအချက်အလက်များကိုသာသိုလှောင်သည်။ ဥပမာ - ကျောင်းသား ဒေတာဘေ့စ - ၎င်းတွင် ၄ င်း၏ ID၊ အမည်၊ မွေးသက္ကရာဇ်၊ အတန်း၊ အတန်း၊ ကောလိပ်တစ်ခုစီတွင်ပညာသင်ကြားနေသောဆုများမှကျောင်းသားများ၏သတင်းအချက်အလက်အားလုံးပါလိမ့်မည်။
ကျွန်ုပ်တို့အားလုံးသည်မည်သည့်ဒေတာဘေ့စ်ကိုဖွံ့ဖြိုးဆဲနှင့်၎င်း၏လိုအပ်ချက် / ရည်ရွယ်ချက်အတိအကျပေါ်တွင်မူတည်သည်။ ပြောပါ၊ ကောလိပ်ဒေတာဘေ့စဖန်တီးပါ။ ကောလိပ်ဒေတာဘေ့စ်တစ်ခုမှာဘာတွေပါဝင်နိုင်မလဲ။ ပထမအချက်ကကောလိပ်အချက်အလက်တွေကိုသူ့ရဲ့နာမည်၊ လိပ်စာလိုမျိုးသိမ်းထားဖို့လိုတယ်။ ထို့နောက်ကောလိပ်၊ ၀ န်ထမ်းများနှင့်သူတို့၏အသေးစိတ်အချက်အလက်များ၊ ဒါပေမယ့်ဒီအချက်အလက်တွေအားလုံးကိုကောလိပ်တစ်ခုအောက်မှာသိမ်းထားသလား။ ဒေတာဗေ့စ်သည်အချက်အလက်များကိုမြန်ဆန်စွာရယူမလား၊ လုံးဝမဟုတ်ပါ။ အရာအားလုံးတစ်ခုတည်းစားပွဲပေါ်မှာသိမ်းထားမယ်ဆိုရင်ဒါဟာပရမ်းပတာဖြစ်လာလိမ့်မယ်။ ထို့ကြောင့်သူတို့သည်အချို့သောစည်းမျဉ်းများကိုမိတ်ဆက်ပေးသည် ဒေတာဘေ့စကိုစီမံခန့်ခွဲ - relational database စီမံခန့်ခွဲမှုစနစ် (RDBMS) ။ RDBMS သည်ဒေတာဗေ့စ်တစ်ခုမည်သို့ဖန်တီးရမည်နှင့်မည်သို့ထိန်းသိမ်းရမည်ကိုလမ်းညွှန်ပေးသောအစီအစဉ်တစ်ခုဖြစ်သည်။ သက်ဆိုင်သောအချက်အလက်များကိုဇယားများမည်သို့ ခွဲ၍ မည်သို့ဆက်စပ်ပုံကိုဖော်ပြသည်။ ၎င်းသည်သက်ဆိုင်ရာအချက်အလက်အားလုံးကိုအလွယ်တကူထိရောက်စွာရွေးချယ် / ထည့် / သွင်း / အပ် / ဖျက်ပစ်နိုင်သည်။
ဤ DBMS သင်ခန်းစာသည်ကျောင်းသားများ၏ database concept များကိုနားလည်စေရန်ကူညီသည်။
လာမယ့်ဆောင်းပါးတွေမှာအမျိုးမျိုးသောအကြောင်းအရာများအတွက်ဒေတာဘေ့စ tutorial (Database Management Tutorial) ကိုကျွန်ုပ်တို့လေ့လာသွားမှာပါ။
DBMS မှ Views
DBMS အတွက်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ Views
ဒေတာသတ်မှတ်ချက်ဘာသာစကား - DDL
ဒေတာစီမံခန့်ခွဲမှုဘာသာစကား - DML
ဒေတာထိန်းချုပ်ရေးဘာသာစကား - DCL
ငွေသွင်းခြင်းထိန်းချုပ်မှုဘာသာစကား - TCL
ER ပုံကြမ်းကို ဆက်စပ်ဇယားများ ဥပမာအဖြစ်သို့ ပြောင်းပါ။
Relational Query ဘာသာစကားများ
Relational ကဲကုလ - Tuple Relational ကဲကုလ - ဒိုမိန်း Relational ကဲကုလ
DBMS ရှိ Hash / တိုက်ရိုက်ဖိုင်စနစ်
B + သစ်ပင်ဖိုင်အဖွဲ့အဖွဲ့အစည်း
DBMS ရှိ Cluster File အဖွဲ့အစည်း
Data Dictionary နှင့် Data Dictionary အမျိုးအစားများ
Indexing ၏အခြေခံသဘောတရားများ - အမိန့်ညွှန်းကိန်းများ
DBMS ရှိ B + Tree နှင့် Extensions များ၏သဘောတရားများ - B + နှင့် B Tree အညွှန်းဖိုင်များ
အကွိမျမြားစှာ Access ကို
Bitmap ညွှန်းကိန်းများ၊ အားသာချက်များနှင့်အားနည်းချက်များ
DBMS အတွက် Relational အစုံအော်ပရေတာ
DBMS အတွက် Codd ရဲ့နည်းဥပဒေ
ပထမ ဦး ဆုံးပုံမှန်ပုံစံ (1NF)
Boyce-Codd ပုံမှန်ပုံစံ (3.5NF) - BCNF
ဒေတာဘေ့စ် (ပုံမှန်မဟုတ်သောစံသတ်မှတ်ခြင်းနှင့်ဒေတာဗေ့စ်) တွင်ပုံမှန်ပုံမှန်မဟုတ်ခြင်းအကြားခြားနားချက်
DBMS တွင် ဒေတာအမျိုးအစားများ
DBMS တွင် null တန်ဖိုးများ
DBMS အတွက် Aggregation
DBMS အတွက် Sub Queries
DBMS အတွက်ဆက်နွယ်နေကြောင်း Sub Queries
DBMS အတွက် Rownum
DBMS ရှိ cursor များ
DBMS အတွက် Query Processing
DBMS အတွက်ရွေးချယ်ရေး Algorithm
DBMS အတွက်အညွှန်းကိန်း Scan
DBMS အတွက်တွဲဖက်, Disjunction နှင့် Negation
Complex သည် DBMS တွင်ပါဝင်သည်
DBMS အတွက် Relational အသုံးအနှုနျးမြား၏အသွင်ပြောင်း
DBMS အတွက် Equivalence နည်းဥပဒေ
DBMS အတွက်နည်းလမ်း Sorting
DBMS အတွက် Query Optimization
DBMS အတွက်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ Views (MV)
DBMS ရှိအရွယ်အစားခန့်မှန်းခြင်း (Selectivity)
DBMS အတွက်ငွေသွင်းငွေထုတ်စီမံခန့်ခွဲမှု Concept ကို
DBMS အတွက်ငွေသွင်းငွေထုတ် Atomicity & ကြာရှည်ခံမှု
DBMS ထဲကိုရေးပါ ဦး
DBMS တွင်ဒေတာ Access ကို
DBMS တွင်အရိပ် paging
DBMS အတွက်ငွေသွင်းငွေထုတ် Serial
DBMS တွင် Transaction Isolation Implementations
DBMS တွင်ထည့်သွင်းထားသော SQL
DBMS အတွက် dynamic SQL
DBMS အတွက်စာရွက်စာတမ်း Database
DBMS ရှိ XML Database
DBMS အတွက် XPath
DBMS ရှိ XQuery
DBMS တွင် Database စနစ်များကိုဖြန့်ဝေပါ
DBMS ရှိ Oracle တွင် Database ဖန်တီးခြင်း